Apple miloka amin'i Shina amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao amin'ny Didi Chuxing | Avy amin'ny mac aho
Apple dia miloka amin'i Shina amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny Didi Chuxing
Laura varo | | About us
After the fanakatonana ny iTunes Movie sy iBooks any Shina ary ny fiezahan'i Tim Cook hamerina ny fifandraisana tsara eo amin'i Apple sy ny governemanta amin'ny tsenany faharoa lehibe indrindra, dia nandray andraikitra ny tale jeneraly manatsara ny fifandraisana miaraka amin'i Sina.
Tsy volana tsara ho an'ireo Cupertino any Shina. Ho fanampin'ny fanakatonana ny varotra amin'ireo rindranasa roa ananany dia fantatsika tato ho ato fa, taorian'ny 4 taona tolona ara-dalàna, dia nataon'i Apple very ny fanajana ny marika "IPHONE" izay azo ampiasaina amin'ny sora-baventy avy amin'ny orinasa Xintong Tiandi Technology.
1 Miala amin'ny indostria vahiny i Shina hanamafisana ny firenena.
2 Apple miatrika fihenjanana any Shina
Miala amin'ny indostria vahiny i Shina hanamafisana ny firenena.
Na dia eo aza manana fahazoan-dàlana ilaina hanokatra ny tsenan'ny iBooks sy iTunes Movies ary aorian'izay Miasa mandritra ny 6 volana, tamin'ny fanapahana tsy nampoizina no nanapahan'ny governemanta sinoa esory ny serivisy tsy misy fampandrenesana mialoha.
Ny sasany ny mpanafika mahery vaika indrindra Ireo mpitarika teknolojia sinoa dia nihaona tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny, Xi Jinping, mba hifampiraharaha momba ny politika Internet mametra ary mankasitraka ny fitomboan'ny orinasam-pirenena. Ity toe-javatra ity, nanampy ny fiatraikany tsy ho ela ateraky ny iPhone SE, no mety ho antony lehibe nahatonga ity fanapahan-kevitra tsy nampoizina ity.
Apple miatrika fihenjanana any Shina
Ho valin'ny fanivanana ny serivisy nomeny, Tim Cook dia nandamina a fitsidihana amin'ny faran'ny Mey handamina ny raharaha miaraka amin'ny governemanta sinoa ary hanohy ny fifandraisana tsara amin'ny fampisehoana ny diplomasia.
Mandritra izany fotoana izany dia nanapa-kevitra ianao mampiasa vola 1.000 miliara dolara amin'ny serivisy fitaterana tsy miankina Didi Chuxin, fampiharana toa an'i Uber, ho an'ny fanadihadiana sy mahatakatra ny tsena sinoa sarotra ilaina tokoa izany ho an'i Apple.
Nanjary i Didi Chuxing fahombiazana tanteraka eo amin'ny sehatry ny fitaterana ao amin'ny firenena izay manana olana be loatra amin'ny mponina: mahavita mihoatra ny Dia 11 tapitrisa ny fahombiazana isan'andro sy ny anjaran'ny tsena 87%.
Azo heverina fa ny fahalianan'ny orinasa amin'ny fampiasam-bola amin'ny indostrim-pirenena sinoa manampy hamelombelona ny fifandraisana tsara izay, na eo aza ny tsy fitoviana, dia nitazona hatrany izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia miloka amin'i Shina amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny Didi Chuxing
iTranslate 2.0 maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Opera ho an'ny OS X dia manome anao fomba fitahirizana angovo vaovao hatramin'ny 3 ora